Somaliland: Faysal Cali Waraabe Oo Ay Ka Fakatay Sir Culus Oo Ku Saabsan Qorshaha Uu La Damacsan Yahay Mustaqbalka Xisbiga UCID - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Faysal Cali Waraabe Oo Ay Ka Fakatay Sir Culus Oo Ku...
Somaliland: Faysal Cali Waraabe Oo Ay Ka Fakatay Sir Culus Oo Ku Saabsan Qorshaha Uu La Damacsan Yahay Mustaqbalka Xisbiga UCID
Faysal Cali Waraabe Oo Cid Sir Ah Laga Duubay Wakhti Uu Beeshiisa Uga Warramayay Qorshayaal Uu Sheegay In Uu Is-Bahaysi Reernimo Kula Samaysanayo Beelaha Habar-Jeclo, Harti, Ciise Iyo Arab. Ucid Waxa Aan Ugu Dambayn Ku Wareejin Doonaa Guddoomiye Ka Soo Jeeda Habar Jeclo” ..Faysal C. Warabe
Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaridka ah ee UCID Eng. Faysal Cali Waraabe ayaa shir hoose oo uu jifadiisa la yeeshay dhawaan waxa uu si mug leh ugaga warramay qorshaha dhaw iyo midka fog ee uu la damacsan yahay xisbigiisa UCID kadib shirweynihii garabkiisu 9-kii Bishii November 2016 u doorteen Musharraxa Madaxweyne ee xisbigaasi kadib khilaafkii ba’naa ee mudada u dhaxeeyay isaga iyo garabkii Jamaal Cali Xuseen. Cod sir ah oo laga duubay shirkaasi Faysal Cali Waraabe ka beeshiisa kula hadlayay oo lagu baahiyey warbaahinta Online-ka ah ayaa waxa uu Faysal kaga hadlayaa qorshayaal uu ku soo jiidanayo beelaha Habar Jeclo, Harti, Arab iyo Beesha Ciise oo uu sheegay in uu dhammaantood ka leeyahay qorshayaal istaraatiiji ah oo uu xisbigiisa cudud reernimo ugu samaynayo isaga oo si cad u sheegay in uu beelaha Arab iyo Ciise la doonayo mansabyo sare oo ka mid ah Golayaasha Guurtida iyo Wakiilada halka uu beesha Harti u qorshaynayo in uu ka dhigto Musharrax Madaxweyne ku xigeen ugu dambayna uu xisbigiisa ku wareejin doono beesha Habar Jeclo sida uu hadalka u dhigay.
Guddoomiye Faysal Cali Waraabe ayaa codkan sirta ah ee laga duubay waxa uu ku leeyahay sidan: “Caawa waxa aan isugu kiin yeedhay ardaageenan ama beesheenan wax kale ma aha ee waxa weeyi waxa aad og tihiin in xisbigii uu ku yimid is baddal (reform) bishii November.
Waxa aad ogaydeen in uu dhacay Koongareeskii xisbigu. Waxa shirka la hor keenay in la aqbalo heshiiskii qoladii Jamaal iyo in la aqbalo. Xisbigu waa diiday oo waa buriyey heshiiskaasi. Kabacdi musharraxnimadii ayaa loo tartamay oo anaa markaa musharrax noqday. Markaa xisbiga waxaannu doonaynaa in aannu reform (isbaddal) ku samayno. Is baddalkaasi waxaannu doonaynaa in uu la jaan qaado is baddalkan cusub ee yimid. Xisbigu markaasi waxa aannu samaysannay yool iyo meel aannu bartilmaameedsano (Target Group) Alxamdulillaahi, maadaama Somaliland asxaabtu ay ku fadhido is xulufaysi reernimo oo la is xulufaysto. Markii hore xisbigu (UCID) is-bahaysi (Alliance) muu lahayn. Waxa uu ahaa xisbi iska Popular ah oo shacabku wato seeskiisuna Ciidagale yahay laakiin hadda waxa aannu xoogga saarnay in aannu beelaha Somaliland qaar ku abtirsadaan xisbiga. Markaa waxaanu awoodda saarnay beelaha aan Musharrax lahayn iyo Guddoomiye oo labadooduba aan xisbiga Musharrax ka ahayn ama aan guddoomiye ku ahayn. Bar-tilmaameedkayagu waxa uu ahaa gaar ahaan (Target Grouop) beesha Habar Jeclo iyo reerka la yidhaa Hartiga, Ciisaha iyo Arabka. Afartaa reer baannu xoogga saarnay”. Ayuu yidhi Faysal Cali Waraabe.
Guddoomiyaha UCID oo sii hadlayaa waxa uu yidhi: “Beesha Harti waxa aan u diyaar garaynay in ay noqdaan Madaxweyne ku xigeenka, beesha Habar Jeclona ugu dambayn in ay Xisbiga Guddoomiye ka noqdaan haddii Ilaahay yidhaahdo.
Beesha Arab waxa aan u diyaarinay in ay noqdaan Guurtida, beesha Ciise waxa aannu u qorshaynay Guddoomiye ku xigeenka labaad ee Baarlamaanka. Markaa intaasiba culays baannu saarnay. Bariga waad ogtihiin oo in badan baan iskaga daba noqday. Jabuuti sidoo kale in badan baan ku noqnoqday. Jabuuti waad og tihiin oo siyaasadda Somaliland ayaanaan isaga fiicnayn. Waad ogtihiin oo dhinaca Galbeed ee Jabuuti in ka badan dhawr iyo labaatan kun oo qof ayaa iska diiwaan geliyey. Beesha Harti waxa iska diiwaan geliyey kaadhkii diiwaan gelinta in ka badan 80-kun oo qof. Gacan weyn baannu ku lahayn in ay dadkaasi is diiwaan geliyaan. Xisbigani (UCID) waxaannu doonaynaa in uu noqdo xisbi (Alternative Party).
Labada xisbi ee kale waxa ku suntamay qabaa’il oo waxa ay seeskoodu noqdeen reero, dadkiina way ka soo taagan yihiin. xaqiiqatan maanta dalku waxa uu u baahan yahay maanta yaa Somaliland isku hayn karaya?. Yaa midayn kara?, yaa aqoonsi raadin kara?, yaa horumar keeni kara?, yaa qaddiyadda Somaliland ka midho dhalin kara? Ayaa weeyi arrimaha hadda taagani. Intuba keenan ayay ka muuqataa. Sidii uu Hartigu u soo noqon lahaa waanigan dib u heshiisiintii wadna. Dhulbahante haddii Alle yidhaa March labaatankeena ayaanu mar kale oo saddexaad is arki doonaa. Halkaasi waxa ay soo dhigi doonaan shuruudaha ay doonayaan in ay la yimaaddaan oo wax inagula yeeshaan. Markaa Insha Allaahu Tacaalaa April labaatankeeda Ramadaanta horteed ayaan doonaynaa in uu dhaco shirweynihii Dhulbahante oo dhanni oo markaasi shuruudahaasi ay keenaan shirweynahaa lagu naqaasho. Markaa anigi waxaan ahay biriishka isku haya wada hadalada Somaliland iyo khaatumo. Xaqiiqo ahaan labada qoloba aniga ayaa u kala dab qaada oo ay igu kalsoon yihiin. Warsangali ayaa iyana lala hadlayaa si aanay u moodin in la dayacay. Iyagana had iyo jeer waan ku daraa oo wada hadaladu way noo socdaan. Haddii ay doonayaan in ay iyagu si gaar ah u fadhiistaan ay doonayaan in ay Harti ahaan inoola shiraan. Markaa waxa ay doorteen in marka hore iyaga gaar loola shiro. Halkaa waxa ku soo xidhmaya markaa in Somaliland mid noqoto oo iyaga oo midaysan ay doorashada gasho haddii Alle yidhaa. Marka intaasi dhammaato…..” intaasi ayuu ku go’ayaa codka Faysal Cali Waraabe laga qabtay oo socday muddo shan daqiiqadood iyo dheeraad ah.
US: Donald Trump calls for halt on Muslims entering the US
Somaliland: Madaxweynaha Somaliland Oo Kulan Muhiim Ah La Qaatay Hoggaamiyeyaasha Xisbiyada Mucaaridka Ah